अन्ततः इन्भेष्टमेन्ट बैंकको साताअघिको कारोबार रद्ध Bizshala -
अन्ततः इन्भेष्टमेन्ट बैंकको साताअघिको कारोबार रद्ध
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एकसाताअघिको विवादास्पद कारोबार रद्ध गरेको छ ।
धितोपत्र बोर्डले मंगलबार दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा लग्दै नेप्सेले अघिल्लो बुधबार(भदौ २१) गतेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक संस्थापक र साधारण सेयरतर्फको सम्पूर्ण कारोबार रद्ध गरेको हो ।
मंगलबार बोर्डले भदौ २१ को कारोबार रद्ध गर्न निर्देशन दिंदै नेप्सेलाई समेत ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ घण्टाको अवधिमा फरक–फरक सूचना जारी गर्दा पनि नेप्सेले किन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेन भन्ने बिषयमा समेत बोर्डले स्पष्टीकरण मागेको हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सो दिन गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको निर्णय भएको भन्दै नेप्सेको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको एकघण्टा पनि नबित्दै ‘टाइप मिस्टेक’ भएको भन्दै पहिलो सूचनामा संसोधन गरी २५ प्रतिशत नगद लाभांश र १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको चाहि निर्णय भएको दाबी गरिएको थियो ।
बजार तथा बैंकको सेयर मूल्यमा प्रभाव पर्ने गरी गलत सूचना प्रवाह भएको बिषयलाई बैंकको अक्षम्य गल्ती भन्दै लगानीकर्ताहरुले त्यसको तीव्र विरोध गरेका थिए । केही लगानीकर्ताले पहिला प्रवाह भएको सूचना अनुसारकै लाभांश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका थिए भने धेरैले चाहि सो दिनको कारोबार नै रद्ध गर्न माग गरेका थिए ।
लगानीकर्ताहरुको हितलाई ध्यानमा राखेर धितोपत्र बोर्डले सोही दिन इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । बैंकले आइतबार(भदौ २५) गते लिखित स्पष्टीकरण दिइसकेको छ ।
त्यसअघि बोर्डले यही प्रकरणमा सिडिएससीलाई भदौ २१ गतेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कारोबार राफसाफ नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
nepal stock exchange nepal investment bank limited
सेयर शिक्षा भाग ५: प्रतिसेयर आम्दानी र मूल्य आम्दानी अनुपात के
-राजु पौडेल सेयर शिक्षा भाग तीन र चारमा मैले नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई...
काठमाण्डौ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल...
माउण्टेन हाइड्रोलाई १२.५० करोडको आइपीओ निश्कासन अनुमति
काठमाण्डौ । माउण्टेन हाइड्रो नेपाल लिमीटेडलाई धितोपत्र बोर्डले...
दोहोरो अंकले बजार घट्दा पनि तीन कम्पनीका लगानीकर्ता मालामाल
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा व्याप्त करको अन्यौल तथा बढ्दो ब्याजदरलाई...
ग्रीनलाइफ हाइड्रोको ३.६० करोडको आइपीओलाई ग्रेड फोरको रेटिङ,
काठमाण्डौ । केयर रेटिङ्स नेपालले ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर लिमीटेडले...
नाडेप लघुवित्तले असार १० देखि रु. ४.८० करोडको आइपीओ निश्कासन
काठमाण्डौ । नाडेप लघुवित्त बित्तीय संस्था लिमीटेडले आगामी असार १०...
अनलाइन प्रणालीका लागि पूर्वाधार तयार गर्न ब्रोकरलाई
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बिहीबार पूर्ण स्वचालित अनलाइन...
अनलाइनको खबरले बजारमा उत्साह आउन लागेको हो ? ७ कम्पनीका
काठमाण्डौ । पूर्व निर्धारित समयमै पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर...